Al-Shabab iyo Beesha Hubeer Oo Ku Dagaalamey Degaanka Kanjiroon Ee G/J/Hoose – idalenews.com
Al-Shabab iyo Beesha Hubeer Oo Ku Dagaalamey Degaanka Kanjiroon Ee G/J/Hoose
Kismaayo(INO)- Dagaallo ayaa maanta iyo shalay ka dhacay deegaanno dhinaca Galbeed iyo Waqooyi Galbeed ka xiga magaalada Kismaayo, waxaana dagaalladan ay u dhexeeyaan maleeshiyada Al-Shabab iyo qabaa’ilaad sida ay goobjoogayaal ay noo sheegeen.
Mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa Warbaahinta u sheegay in Al-Shabab ay ilaa geel dhan 1000 neef ka kaxaysteen deegaannada Yaaq Biraale, Booray iyo deegaanka Kanjiroon.
Waraarka ay heshay IdaleNews.com waxay sheegayaan in maleeshiyada qabaa’ilka ay is-abaabuleen islamarkaana ay dagaal kala hortageen kuwa Al-Shabab. Ugu yaraan saddex qof oo dadka deegaanka ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalladan.
Daawo:Dowlada Turkiga oo Qalabka Beeraha ku wareejiyey beeraleeyda Shabeelooyinka